पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात - एक हप्ता सोच्नुहोस्
आउनुहोस् जीवनको सुरुवातबाट सुरु गरौ । हामीले यसको ’boutमा अघिनै के पत्ता लगाएका थियौँ ?
१९६६ मा भूगर्भवित कार्ल सागनले ग्रहमा भएको जीवनलाई सहायता पु¥याउने २ वटा महत्वपूर्ण मापदण्ड पत्ता लगाए । एक ठीक प्रकारको तारा (शत्तिको श्रोतकोलागी) र त्यो ताराबाटको ठीक दूरी (चिसो र तातोबाट सुरक्षाकोलागी) ब्रहृमाण्डमा यी मापदण्डहरु मिल्ने करिब १०००,०००,०००,०००,०००,००० वटा ग्रहहरु छन् भनी अनुमान गरिएको छ ।
१९६६ देखि के भयो ? हामीले ब्रहृमाण्डको विषयमा धेरै सिक्यौ“ । जसै हामी धेरै सिक्छौँ, जीवनको लागि आवश्यक हुने थप मापण्डहरु थाहा पाउन सक्यौ ।
पृथ्वीमा जीवनको लागि कुनै मौका नै छैन ? सागनका २ वटा मापदण्डहरु बढेर १० सम्म पुगे, त्यसपछि २० र ५० भन्दा बढि पनि । त्यसपश्चात जीवनलाई सहायता पु¥याउछ भनी मानीने ग्रहहरुको संख्या तीब्र गतीले घट्दै गयो । वास्तवमा, कुनै ग्रह यहाँसम्म कि पृथ्वीले पनि स्वत जीवनलाई मद्घत पु¥याउदैन । यी मापदण्डहरुका अनुसार त, हामी यस संसारमा जीवित नहुनुपर्ने हो, तर हामी यहाँ छौ । यी सबलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा, जीवनलाई सार्थक बनाउने अन्य ग्रह नभेट्टाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन ।
त्यहाँ अझै धेरै छ
हाल यस ग्रहहरुलाई जीवन्त राख्न साहायता गर्नको लागि २०० भन्दा बढी आवश्यक प्रमाण गरिएका ग्रहहरुछन् । हरेक एकअर्कासँग पूर्णतय मिलेका छन नत्रता सबै कुरा छुट्टिएर संसार नष्टहुन्छ । उदाहरणको लागि, ः बृहस्पति जस्तै एक विशाल ग्रह अरु ग्रहको नजिक हुन आवश्यक छ । बृहस्पति ग्रहको गुरुत्वाकर्षणले साना ग्रहलाई टाढा राख्न धक्का दिन्छ र त्यस्ता हजारौलाई पृथ्वीमा ठोक्किनबाट बचाउँछ ।
ब्रहृमाण्डलाई जीवित राख्न बनिएका कुराहरु नै अचम्म छन् ।
जे भएपनि हामी जीवित छौ हामी यहाँ जीवित छौ, जीवित मात्रै होइन तर जीवनको विषयमा बातचित पनि गर्दैछौ । यो कसरी सम्भव छ ? के यो भाग्यको कारणले पृथ्वीमासबै तत्वहरुलाई पूर्णतय मिलाएर राखिएको हो ? कुनै त्यस्तो भन्नक्ने कारण छ की पृथ्वी चाहि उद्धेश्य बिना अकस्मात बनेको हो ? यसरी विचार गरेर हेर्दा अरु ग्रहहरुमा भन्दा पृथ्वीमा जीवित रहनकालागी चाहिने आवश्यकतत्वहरु सरल छन् ।
वज्ञानले जीवन पुर्णब्याख्या गर्न सक्दैन कोहि व्यक्तिको बुद्धिले मात्र यी सिद्ध अवस्थाहरु बनायो भनेर तर्क गर्नसकिन्छ र? या तपाईहरु अझै सृष्टिको विष्यमा विज्ञानको अपूर्ण स्पष्टिकरणबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
के तपाई अचम्भीत हुनुभएन ?
दिन दिन जारी राख्नुहोस्
९ज्ञ० उदाहरणको लागिः खगोल विशेषयज्ञहरु लाई चार आधारभूत शक्तिहरको विषयमा थाहा छ ( गुरुत्व, विद्युत, बलियो र कमजोर, आवणिक शक्ति) यसले प्रमाणित गर्दछ कि एउटै बिष्पोटनका कारणले संसार बनेको होइन यदि यसो भएको भए १०००००००ंंं……….तारा र ग्रह हरुले अलिकतीमात्र अक्ष र कक्ष को दुरि फरक हुदा प्रकास र तापक्रमको कारण संसार बनिनेनै थिएन र तारा हरु रहने थिएनन